Barnaamijka madax furashada, Kaniisada aduunka ee Switzerland (WKG)
Dhamaadka dhammaadka injiilkiisa, faallooyinkaas xiisaha leh ee rasuul Yooxanaa waa la akhriyi karaa: «Ciise wuxuu ku sameeyey calaamooyin badan oo badan xertii hortiisa, kuwaas oo aan ku qornayn kitaabkan ... Laakiin haddii mid loo qoro mid ka daba xiga, waxaan dhihi lahaa , dunidu ma rumaysan karto buugaagta ay tahay in la qoro » (Yooxanaa 20,30: 21,25). Iyada oo ku saleysan faallooyinkaas iyo tixgelinta xisaabaadka farqiga u dhexeeya afarta Injiil, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in xisaabaadka aan soo sheegnay aan loo qorin raad raac dhammaystiran ee nolosha Ciise. Yooxanaa wuxuu sheegayaa in qoraalladiisa loogu talagalay "si aad u rumeysatid inuu Ciise yahay Masiixa, Wiilka Ilaah, iyo inaad rumaysadka ku noolaan kartaan magiciisa" (Yooxanaa 20,31). Ujeeddooyinka ugu weyn ee Injiillada waa in lagu wacdiyo injiilka ku saabsan badbaadiyaha iyo badbaadada la siiyay.
In kasta oo John ee Badbaadiyaha 31 badbaadiyey (Noloshu) oo la xidhiidha magaca Ciise, Masiixiyiintu waxay ka hadlayaan in la badbaadiyey dhimashadii Ciise. Qoraalkan gaagaaban ayaa ilaa hadda sax ah, laakiin tixraaca keliya ee badbaadada dhimashada Ciise waxay qarin kartaa dhammaystirka cidda uu yahay iyo waxa uu u sameeyey badbaadadeenna. Dhacdooyinka Toddobaadka Quduuska ah waxay ina xusuusinayaan in dhimashadii Ciise - in kasta oo ay muhiim tahay - waa in lagu arkaa duruufo ballaadhan, oo ay ka mid yihiin Isku ekaanshaha Rabbigeenna, dhimashadiisa, sarakiciddiisa iyo u dabbaaldegaan. Dhammaantood waa kuwo lama huraan ah, dhacdooyin lama-filaan ah oo xidhiidh la leh hawshiisa badbaadada - shaqada nolosheenna ina siisa. Markaa inta lagu gudajiray Toddobaadka Quduuska ah, iyo sanadka intiisa kale, waxaan rabnaa inaan u aragno Ciise inuu yahay shaqada ugu fiican ee madax furashada.
Dhalashada Ciise ma ahayn dhalashada maalinlaha ee qof caadi ah. Isagoo gaar u ah dhinac kasta, wuxuu asaasi u yahay bilowga u ekaanta Eebbe qudhiisu.Isagoo ku dhashay dhalashada Ciise, Ilaahay wuxuu noo yimid isagoo bini aadam ah si la mid ah sida aadanaha oo dhami ay u dhasheen ilaa Aadan. In kasta oo uu ku sii jiray waxa uu ahaa, Wiilka weligiis ah ee Eebbe waxa uu ka aqbalay nolosha aadanaha gebi ahaanba - bilow ilaa dhammaad, dhalasho ilaa dhimasho. Qof ahaan, isagu waa Ilaah iyo gebi ahaanba aadanaha. Bayaankan aadka u culus waxaan ka helnaa macne weligiis ah oo u qalma mahadnaq weligeed ah.
Isaga oo jidhkiisii ​​galay, ayaa wiilka weligiis ah ee Ilaah ka soo baxay weligiis iyo sidii bini-aadamka oo ka soo baxay jidh iyo dhiig xagga abuurkiisa, oo lagu xukumay wakhti iyo meel. "Ereyguna jidh buu noqday, oo wuu ina dhex joogay, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaanta u ekayd tan keliya ee Aabbaha, ee nimco iyo run ka buuxa." (Yooxanaa 1,14). Runtii, Ciise wuxuu ahaa shaqsi dhab ah dhammaan aadamnimadiisa, laakiin waqti isku mid ah isagu sidoo kale wuxuu ahaa gebi ahaanba Ilaah - asal ahaan Aabbaha iyo Ruuxa Quduuska ah. Dhalashooyinkiisii ​​oo dhammaystiray waxsii sheegyada badan oo ay ka kooban yihiin ballanqaadka badbaadadeenna.
Qudduusnimadu kuma ayan dhammaan dhalashadii Ciise - waxay ka sii gudubtay noloshiisa dunidan oo dhan waxaana hadda lagu sii rumeeyey noloshiisa aadanaha ee ammaanta leh. Islaantii (ie, jidh ahaan) Wiilkii Ilaah wuxuu muhiimad ahaan la mid yahay Aabbaha iyo Ruuxa Quduuska ah - dabeecadiisa rabbaaniga ahi waa mid jirta oo awood buuxda leh, taas oo noloshiisa siisa isaga oo ah bina aadam oo macne u leh. Sidaas ayuu ku leeyahay Rooma 8,3: 4: "Wixii sharciga aan ugu suurtoobin maxaa yeelay itaalka daciifiyey aawadood, Ilaah baa sameeyey: Wuxuu u soo diray wiilkiisii ​​isagoo ah qaabkii jidhka diiran oo dembiga aawadiis, oo wuxuu xukumay dembiga. xagga jidhka, si caddaaladdu u baahan tahay sharciga in lagu xukumo waa innaga, kan aannan ugu noolayn sida jidhka, laakiin sida ruuxa loo arko - - Bawlos wuxuu sii sharraxay "inaan naftiisa ku badbaadi doonno" (Rooma 5,10).
Noloshu iyo shaqadii Ciise si isku mid ah iskuguma dhex jiraan - labaduba waa qayb ka mid ah jidhka. Ciise-Man Ciise waa wadaadka sare ee ugu wanaagsan iyo dhexdhexaadiye u dhexeeya Ilaah iyo nin. Wuxuu qayb ka noqday dabeecadda aadanaha wuxuuna dadka u horseeday caddaalad isagoo horseeday nolol aan dembi lahayn. Xaqiiqaddani waxay awood noo siineysaa inaan fahamno sida uu u kobcin karo xiriir, Ilaah iyo dadka. In kasta oo aan u dabaaldegno dhalashadiisa dhalashada kirismaska, dhacdooyinka noloshiisa oo dhan had iyo goor waa qayb ka mid ah ammaantayada oo dhan - xitaa inta lagu jiro usbuuca Quduuska. Noloshiisa waxay muujineysaa xiriirka ka dhexeeya badbaadadeenna. Ciise, qaab ahaan, wuxuu isu keenay Ilaah iyo aadanaha xiriir wanaagsan.
Qaarkood waxay marin habaabinayaan bayaankii gaagaabanaa ee ahaa inaanu ku badbaadinay Ciise dhimashadiisa khaladkii ahaa in dhimashadiisu ahayd allabari gubasho oo sababtay ilaahay nimcadiisa Waxaan ilaahay ka baryayaa in aan wada aqoonsano qulqulka fikirkan.
TF Torrance wuxuu qoraa in dhimashadii Ciise ka dhanka ah asalka saxda ah ee fahamka allabarigii Axdiga Hore, ma aqoonsanayno jaahiliin la cafiyo, laakiin markhaatiga xoogga leh ee doonista Eebbe naxariis leh (Kafaaraggudka: Qofka iyo Shaqada Masiixa, bogga 38-39). Cibaado caabudid oo jaahiliin ah ayaa lagu saleeyay mabaadii'da aargudashada, halka nidaamka allabari ee Israa'iil ay ku salaysnayd mabda'a is cafinta iyo dib-u-heshiisiinta. Halkii ay dambi dhaaf ku heli lahaayeen hadiyadaha allabari, reer binu Israa'iil waxay arkeen naftooda inay Ilaah u leeyihiin awood ay ku cafiyaan dembiyadooda iyo inay la heshiiyaan isaga.
Waxyaabaha reer binu Israa'iil waxaa loogu talagalay in lagu caddeeyo oo loo muujiyo jacaylka Ilaah iyo nimcadiisa iyadoo la tilmaamayo aayaha geerida Ciise, oo lagu bixiyo dib-u-heshiisiinta lala yeesho Aabbaha. Dhimashadiisa, Rabbigeenna wuxuu sidoo kale ka adkaaday Shaydaanka oo qaatay awoodda dhimashada laftiisa: "Maxaa yeelay carruurtu hadda waa hilib iyo dhiig, isna isaguna wuu u aqbalay si isku mid ah, in dhimashadiisa uu ku qaado xoogga awooda ku leh dhimashada, taas oo ah Ibliiskii, oo wuxuu soo furtay kii, isagoo ka baqay geerida, oo ay ahayd inuu cimri dheer addoommo ugu ahaado » (Cibraaniyada 2,14: 15). Bawlos wuxuu intaa raaciyay in ciise "uu xukumi doono ilaa Ilaah cadaawayaashiisa cagihiisa hoostooda geliyo". Cadowga ugu dambeeya ee la baabba'o waa dhimasho » (1 Korintos 15,25: 26). Dhimashadii Ciise ayaa ina tusaysa qaybta kafaaraggudka badbaadadeenna.
Axadda Ciidda Masiixiga, waxaan u dabaaldegaynaa sarakicidda sarakicidda Ciise, oo fulisa waxsii sheegyada Axdiga Hore. Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa farta ku fiiqay in badbaadada Isxaaq dhimashadu ay ka turjumayso sarakicidda (Cibraaniyada 11,18: 19). Kitaabka Yoonis waxaan ka barannay inay ahayd "saddex maalmood iyo saddex habeen" jirkii kalluunka weyn (Yoon 2, 1). Ciise wuxuu tixraacay dhacdadaas la xiriirta dhimashadiisa, aaskiisa, iyo sarakicistiisa (Matayos 12,39-40); Matayos 16,4: 21 iyo 2,18; Yooxanaa 22).
Waxaan ugu dabaaldegaynaa sarakicidda sarakicidda Ciise farxad aad u weyn maxaa yeelay waxay ina xusuusineysaa in dhimashadu ayan ahayn kama dambeys. Saas ma aha, waxay ka dhigan tahay tallaabo dhexdhexaadin ah oo ku socota jidkeenna mustaqbalka - nolosha weligeed ah ee Ilaah lala yeesho. Ciidda Masiixiga waxaan u dabaaldegnay guushii Ciise ee dhimashada iyo nolosha cusub ee aan isaga ku dhex arki doonno. Waxaan si aad ah u sugeynaa farxad waqtiga waqtiga Muujintii 21,4 uu kuhadlayo: «[...] oo Ilaah baa indhahooda ka tirtiraa indhahooda, oo dhimashaduna mar dambe ma jiri doonto, oo xanuun, oohin, ama xanuun. intaa ka sii badnaan doona; maxaa yeelay kii hore wuu dhaafay. Sarakicistu waxay u taagan tahay rajada badbaadadeenna.
Dhalashada Ciise wuxuu ku dhammaaday noloshiisa iyo noloshiisa taa beddelkeedana wuxuu horseeday dhimashadiisa. Si kastaba ha noqotee, kama sooci karno geeridiisa iyo sarakiciddiisa, kumana kala sooci karo sarakiciddiisa iyo koorkiisa. Kama soo bixin qabrigii si uu ugu noolaado nolol bini aadam. Wuxuu cirka u aaday si dabiici ah oo sharaf leh aadamiga, oo keliya dhacdadan weyn ayaa shaqadii uu bilaabay.
Hordhaca buugga 'Torrances' ee kafaaraggudka, Robert Walker wuxuu qoray: "Sarakicidda kuwii dhintay, Ciise wuxuu nuugaa udub dhexaadkayada sida bini-aadamka oo wuxuu u horseedaa jiritaanka Ilaah midnimada iyo bulshada jacaylka kaabayaasha ah." CS Lewis ayaa sidan u dhigay: "Taariikhda masiixiga, Ilaah baa soo degay ka dibna dib ayuu u bilaabmay." Warka wanaagsan ee yaabka leh ayaa ah in Ciise na kor qaaday isaga qudhiisa. «... oo isagaa kor inoogu qaaday oo jannada ina geliyay Ciise Masiix, si wakhtiga imaatinka uu muujiyo hodantinimada nimcadiisa ee wanaagiisa uu inoogu qabo xagga Ciise Masiix» (Efesos 2,6: 7).
Jiritaankii, geeridii, sarakiciddii iyo u dabbaaldegaan - dhammaantood waxay qayb ka yihiin badbaadadeenna sidaasna waxay tahay ammaantayada ee Isbuuca Quduuska ah. Dhacdooyinkaasi waxay tilmaamayaan wax kasta oo Ciise inoogu dhammaystiray noloshiisa iyo hawshiisa oo dhan. Sanadka oo dhan, aan aragno inbadan oo isagu yahay iyo waxa uu noo qabtay. Waxay u taagan tahay shaqada saxda ah ee badbaadada.
waxaa qoray Josep Tkack